Maitiro mune ecommerce mu2020 | ECommerce nhau
Maitiro mune ecommerce mu2020
Jose Ignacio | | CMS uye Technology, Zvidzidzo uye zviwanikwa
Neraki, pane nzira dzakawanda dzekuita zvimwe kutengesa online, mazhinji acho anogona kunyatso kuitiswa kune edu pachedu nehunyanzvi zvido. Uye kubva munzira iyo vanhu vanotenga kune iyo nzira yepamhepo bhizinesi tekinoroji rinotarisirwa - e-commerce iri kugadzirisa kune mamwe makuru shanduko.
Isu tinogona kuita chidzidzo chekuti e-commerce yasvika sei mumakore gumi kana maviri apfuura, asi pakupera kwezuva, chakakosha kwauri ndewekuti e-commerce iripi uye kwatiri kuenda.
Saka iko kupi e-commerce izvozvi? Zvakanaka, pakupera kwe2019 (zvinoenderana nedatha kubva kuStatista) musika wepasi rose e-commerce yaive nekutengesa kunosvika $ 3.500 bhiriyoni uye kwakaverengerwa 14% yemugove wese wevatengesi vekutengesa pasi rose.
1 Uye chii chichauya muna 2020?
2 E-commerce mafambiro
3 B2B iri kukura ... uye ichichinja
4 Batsira zvitoro kusangana nevatengi
5 Chatbots dzinovandudza zviitiko zvekutenga
6 Kutenga nhare kunoenderera
7 Dzimwe nzira dzekubhadhara
8 E-commerce inogonesa kuenderera kutsva
9 Kunyorera kunochengeta vatengi vachidzoka
Uye chii chichauya muna 2020?
Iyi data inofungidzira kuti panopera 2020, yepasi rose e-commerce kutengesa kunosvika $ 4.200 bhiriyoni uye account ye16% yevatengesi vese vekutengesa. Uye idzi nhamba dzinongofungidzirwa kuti dzichakwira apo isu tichienderera mukati ma20s.
Asi kune varidzi vezvitoro, hazvisi nyore sekugara pasi uye kuona kuyerera kwemari. Makwikwi epamhepo akasimba. Kushambadzira mitengo kwakakwira. Ruzha rweDhijitari rwunowedzera. Uye nzira iyo vanhu vari kutenga iri kuchinja.
Kuchengeta pamwe neazvino mafambiro e-commerce, kusanganisira ese ari maviri backend kugona uye kumberi kwekushandurwa kwekugadzirisa zviitiko, zvakakosha mukukura mune 2020 yekutengesa nzvimbo.
Takataura nezve izvo chibvumirano chaicho chinofanira kutaridzika pazvinhu zvikuru zvavanoona mu e-commerce nekutengesa gore rino. Pasina imwezve ado, heano mabheji edu akanakisa eecommerce maitiro atinoona achibuda (kana kuramba achingove makuru vatambi) mu2020.
AR inovandudza chokwadi chekutenga pamhepo.
Pachave nekuwedzera vhoriyamu yekutsvaga izwi.
AI inobatsira zvitoro kusangana nevatengi.
Pa-saiti kusarudzika kunoshandisa iyo zivo kugadzira zvakasarudzika zviitiko.
Yakakura data inoita basa rakakura mukugadzira zvakasarudzika zviitiko.
Chat bots inovandudza ruzivo rwekutenga.
Kutenga nharembozha kunoenderera nekufamba.
Dzimwe nzira dzekubhadhara.
Musoro usina musoro, API-based e-commerce inogonesa kuenderera kwekuvandudza.
Vatengi vanopindura vhidhiyo.
Kunyorera kunochengeta vatengi vachidzoka.
Kuchengetedza kuri kuwedzera kukosha.
Mabhizimusi anofanirwa kukwidzirisa zano redhijitari rekushandurwa.
B2B iri kukura ... uye ichichinja
Kuwedzera kwechokwadi kunovandudza chokwadi chekutenga pamhepo. Saka kutenga pamhepo kune zvakawanda zvinobatsira: kuchengetedza nguva nekuenda kuzvitoro zvakawanda, kutsvagisa uye kutarisa mitengo muzvivanze zveimba yako, kuwana zvigadzirwa kubva kuzvitoro zviri kure, uye kazhinji kuchengetedza nguva nemari.
Nepo nzira dzekutumira dzakabvumidzwa kutenga pamhepo kuve zvakangofanana kugutsa kwekukasira sekutenga kwekutengesa, kare pakave nedambudziko: haugone kunzwa kana kuona chigadzirwa pamuviri kana kumba.
Pachave nekuwedzera vhoriyamu yekutsvaga izwi. Loop Ventures inofungidzira kuti 75% yedzimba dzeUS dzichava nemutauri akangwara panosvika 2025. Vanhu vari kuramba vachivimba nevabatsiri vezwi vakaita seGoogle Assistant kana Amazon Alexa kuti vaite zvese kubva pakuongorora mamiriro ekunze kusvika pakutenga zvigadzirwa. Online.
Sezvo dzimba zhinji uye zhinji dzichiwana tekinoroji iyi uye dzichiwedzera kusununguka kuishandisa kutenga, pane zvakawanda zvisingabvumirwe mikana ye e-commerce mabhizinesi anotarisa kupaza pasi pevhu.
Kwete vashoma vaongorori mumusika uyu wezvekutengesa parizvino vari kuratidza chokwadi chekuti "mugove wakakura wezwi-inogoneswa mhinduro munzvimbo yekutengeserana neAmazon Alexa neGoogle Imba" pamusoro pezita ravo rezviitiko zvegore ra2020 rekucherechedza.
Batsira zvitoro kusangana nevatengi
Chimwe chiitiko chekutenga pamhepo icho chakambove chakarasika mukutenga pamhepo ishamwari inobatsira chitoro uyo anogona kupa kurudziro yechigadzirwa uye nhungamiro yemunhu zvichienderana nezvinodiwa nemutengi kana zvikumbiro.
Sezvo huchenjeri hwekunyepedzera uye kudzidza kwemuchina zvanyanya kuve zvine hunyanzvi, mazhinji e-commerce mabhizinesi akatotanga kuishandisa kuti iite smart chigadzirwa kurudziro. Izvi hazvisi izvo chete zvingangowedzera muna 2020, asi chinongova chidimbu cheaizi maererano nenzira dzaunogona kupa kune zvekutengesa uye e-commerce.
Mavara emafashoni anoshandisa njere dzekunyepera kuita sarudzo dzakangwara pamashandisiro avo edhijitari. Mhedzisiro yacho yaive yekuwedzera kwe76% yemari kubva kune vezvenhau.
Vanhu vanoda kuziva kuti mabhureki ane hanya navo, uye zano rebhizinesi richarongedzwa zvinoenderana. Isu parizvino taona hunhu hwakapesana pane vezvenhau, uko AI inodzidza kubva pane zvakashata zvinotaurwa nevanhu, asi vatengi vanogona chaizvo kukarira kuitika. Kana bots ikakwanisa kudzidza kuumba mitsara kuburitsa manzwiro, makambani achakwanisa kuvadzidzisa kupa nyaradzo uye zvigadzirwa zvinoenderana nemamiriro evatengi.
Pa-saiti kusarudzika kunoshandisa iyo zivo kugadzira zvakasarudzika zviitiko. Sezvambotaurwa pamusoro apa, marongero erudzi urwu rwekutengesa ari kuwedzera mu e-commerce uye nenhamba yekushandisa. Imwe nzira yazvinogona kushandiswa kuunganidza ruzivo nezvevashanyi uye wozobatsira kugadzirisa saiti kune zvavanoda uye zvavanoda. Vanhu vanokoshesa zviitiko uye zvigadzirwa zvakagadziridzwa kwavari. Ichi chinhu chinowanzorasika mukuchinja kuenda online, kuzvishandira-kushambadzira.
Kuzadzikisa zviitiko zvakasarudzika pane saiti kana mukushambadzira kwakaratidzirwa kuve nesimba rakasimba pamari, neimwe ongororo ichiona iine 25% kuwedzera kwemari. Dzazvino dhata zvakare dzinoratidza kuti kuita kwehunhu munhu kunogona kudzora bounce mitengo ne45%.
Vaongorori vakazvimiririra uye e-commerce nyanzvi vanoona kuti hunhu hunofambiswa nerudzi urwu rwezano mukutengeserana kwedhijitari kuri kuwedzera kukosha muna2020. Iko semakemikari anowedzera uye anowedzera mamwe data, ivo vanozokwanisa kugadzira zviitiko zvinoshamisa. Zvinoenderana nevatengi vano inzwa yakagadzirirwa-kugadzirwa.
Yakakura data inoita basa rakakura mukugadzira zvakasarudzika zviitiko. Ehezve, hazvisi zvese zvemunhu zvakagadzirwa zvakaenzana, uye nyanzvi dzakasiyana dzine zviono zvakasiyana zvekuti e-commerce kuita kwako kuchaenda mu2020. Kuita munhu kunoonekwawo nevamwe sebakatwa-rakacheka-mbiri nekuti data uye zvakavanzika zvinomutswa sekushushikana. Kune vamwe vatengi.
Mune chero emamiriro ezvinhu anomuka izvozvi, hapana mubvunzo kuti chiyero chekushandurudza chiine fungidziro dzayo yekuti maitiro acharamba achichinja sei pamwe nezvinetsekana nezve data.
"Sezvo matekinoroji makuru achiramba achiwedzera uye achiunza mamwe mabasa epamba, hunhu hunowana nzira muInternet yezvinhu. Kunze kwekuona mazano pane injini dzekutsvaga kana mapuratifomu ekutenga, isu tichavaonawo pane edu thermostats uye kamera dzemabhero kamera. Nekudaro, pamwe mimwe yemitemo ichiitwa, tinogona kusarudza kusatora chikamu. Izvi zvinogadzira inonakidza dichotomy - vanhu vane zvakasarudzika-zvakasarudzika zviitiko uye nevaya vasina. Izvi zvichave nemhedzisiro inonakidza pamaitirwo atingaita isu sevatengesi kusvika kuvashandisi vatsva.
Chatbots dzinovandudza zviitiko zvekutenga
Pakati pehunyanzvi hwekugona hunogara huripo kuti chatbot inogona kushandira basa remutengesi. Chatbots inobvumira zvitoro kuti zvitaurirane nezviuru zvevatengi, zvichivapa iwo manzwiro ekutariswa kwavo uye mazano anofungidzirwa anoenderana nemhinduro dzavo.
Uye muchokwadi, huwandu huri kukura hwevatengi hunofarira kutaura nemabhoti uye nezvimwe zvekuzvishandira zvishandiso zvemadhijitari. Imwe ongororo yakawana kuti vanopfuura 60% yevatengi vanotaura kuti vanosarudza kuve nemawebhusaiti, maapplication, kana chatbots anopindura mibvunzo yavo yakapusa. Chimwe chezvikonzero chikuru cheizvi ndechekukurumidza nguva yekupindura.
Nyanzvi dzinofungidzira kuti makumi masere muzana emabhizimusi anoshandisa chatbots mu80. Pamusoro pekuwedzera kuwanda, pane nzira dzinoverengeka idzo nyanzvi dzinofungidzira kuti bots dzichamutsa
Kutenga nhare kunoenderera
Parizvino, isu takanyanya kutarisa nzira idzo e-commerce iri kuvhara gap uye kuunza zvidhinha-uye-dhaka zviitiko online. Nekudaro, kuchine zvimwe zvinhu zvakawanda izvo e-commerce zvine chekuita ne-mu-munhu kutengesa. Imwe yemabhenefiti akajeka kugona kutenga kubva chero kupi.
Parizvino muUnited States zvinofungidzirwa kuti inopfuura hafu yevatengi vanotenga vachishandisa nharembozha. MuEurope, 55% yevatengi vari kutenga parunhare.
E-commerce mabhizinesi ari kuita nepavanogona napo kupa musono mushandisi ruzivo pane yavo e-commerce saiti ine dzinoverengeka nzira dzekubhadhara, kusanganisira e-wallets. China inotungamira mukubhadhara pamhepo, iine WeChat neAlipay imwe neimwe ine vanopfuura bhiriyoni rimwe revashandisi.
Neichi chikonzero, hazvishamise kuti chimwe chezvikonzero zvakawanda zvavanofunga icho chinobatsira iyi shanduko yakakosha ndeye chokwadi chekuvandudzwa kwehunhu uye kubatanidzwa kukuru kwemabhadharo efoni. Semumwe wevakuru vekutangisa shanduko mu2020.
Imwe mhinduro kune inowedzera nhamba yevanoshandisa nhare kushandiswa kwePWAs kana kufambira mberi kwewebhu kunyorera. PWAs dzinogona kupa mbozhanhare vatengesi echinyakare app-sechiitiko nezvimiro senge kugona kwekushanda pasiri pamhepo uye kubvumira kusundira Notices. Ivo vanogona kupa e-commerce mabrandari imwe nzira yekuvandudza rwendo rwevatengi rwevatengi vepamhepo vachishandisa nharembozha.
Dzimwe nzira dzekubhadhara
Isu tinotaura nezve tarisiro yekutenderedza sarudzo dzekubhadhara nharembozha, asi vatengi vari kumirirawo zvimwe uye zvirinani nzira dzekubhadhara. Semuenzaniso, pavanotenga kubva kune bhizinesi rekunze vanogona kutarisira kuzokwanisa kutenga vachishandisa wavanoda mubhadharo wepanzvimbo mubhadharo.
Pamusoro pezvo, vatengi vanoshandiswa kurerutsa kwekutengesa pazvitoro zvikuru zvepamhepo zvakaita seAmazon neWalmart. Ivo vanochengetedza vatengi kubhadharisa uye kutumira ruzivo kuti vatenge nekukurumidza uye nyore pasina kudikanwa kwekuisa yakawanda data. E-commerce mawebhusaiti ari kuwedzera kushandisa sarudzo dzekubhadhara dzakadai seApple Pay, Paypal, uye dzimwe sarudzo dzemari dzinobvumidza kubhadharisa pasina kukakavara.
Mupfungwa iyi, kune vazhinji vanoongorora mukutengesa pamhepo vanotenda kuti iyo yepakati pekubhadhara iri kufambira mberi mugore ra2020.
Funga kuti zvingave nyore sei kutenga chigadzirwa pane chero webhusaiti kana, panguva yekutenga, iwe ungangovapa yakasarudzika ID yako. Ichi chiziviso chakasarudzika chinenge chiri chepakati pehomwe sevhisi iyo inogona kuchengetedza zvakachengetwa ruzivo rwako rwekubhadhara, kutumira uye adhiresi ekubhadhara, zvaunofarira, nezvimwe. Makambani akaita seApple nePayPal vakatora mifananidzo yeizvi munguva yakapfuura, asi ini ndinofunga zvinogona kuve zvakajairika.
E-commerce inogonesa kuenderera kutsva
Kusvika parizvino, mazhinji ezve kuitika pazverongwa zvave zvinhu izvo mutengi anopindirana nazvo zvakananga. Nekudaro, iyo tekinoroji chimiro che backend yeyaunofarira online chitoro pamwe hachisi chimwe chinhu iwe chaunoziva nezvayo, kunyangwe kana ichive nemhedzisiro huru pane yako yakazara ruzivo.
Musoro wemusoro wekutengeserana imhinduro inobvumidza chitoro e-commerce chikuva kuti chibviswe zvachose kubva pane yekuratidzira rukoko rwemberi. Izvi zvinogona kuvabvumidza kushandisa iripo kana yetsika CMS, DXP, PWA, kana mamwe akawanda mafonti kupedzisa yavo tekinoroji stack. Izvi zvinogona kuve nemhedzisiro ine simba kune izvo izvo chitoro chinokwanisa kuzadzikisa nekushambadzira zvemukati, SEO, uye neruzivo rwe digital pane yayo facade.
Iyo gore ra2020 inogona kuona kuwedzera mukutora kwemusoro usina musoro mabheji mhinduro - kunyanya nyowani isina misoro yemabheji mhinduro senge mamwe maIoT nemaPWAs. Izvo zvakare zvinogona kutariswa nemusika wakakura unosanganisira mabhizinesi madiki uye kesi dzekushandisa dzeB2B.
Kunyorera kunochengeta vatengi vachidzoka
Kwegore ra2020, tauya nenzira yakareba kubva kumuchero wekirabhu yemwedzi. Zvirongwa zvekunyorera zvine zvikomborero zvinoverengeka kune vatengesi nekuti zvinoita kuti zvive nyore kufungidzira zvinodiwa kutevedza uye chengetedza vatengi kune akakosha kwenguva refu.
Dzimwe nyanzvi dzinoyambira kuti vatengi vari kuwedzera kuziva nezve kukanganisika kwemasevhisi akawanda ekunyorera pamabhajeti avo, saka vanogona kunge vachida zvakanyanya mune ramangwana. Vatengesi vanotora iyi bhizinesi modhi mune rinouya gore vanofanirwa kuziva izvo zvinoita kuti kwavo kunyoresa kunyoresa kuve kunofanirwa-kuve nako.
Kuchengetedza kuri kuwedzera kukosha. Nekuti zvirizvo, mune izvo zvisingatarisirwe kunge zvichipfuura maitiro, vanhu vari kuwedzera kuziva nezve iro basa ravo rekutenga sarudzo rinoita mune mashoma mashoma epasi.
Kubata kuri kutora kukosheswa kwevatengi vemazuva ano, uye mabhureki ari kutsvaga nzira dzekuiisa muzvigadzirwa zvavo, nzira dzekuteerera, nekutengesa kwavo. Ongororo yakaona kuti 50% yevakabvunzwa vaida kugadzikana muindasitiri yemafashoni, uye 75% vaida kuona mashoma ekupakata.
Mabhizimusi anofanirwa kukwidzirisa zano redhijitari rekushandurwa. Zvisinei nezvavanotengesa, ivo vanogona kunge vaine vamwe vakwikwidzi. Kugara pamberi pavo hazvireve kungowana chete zvinotungamira kune yako saiti, asi kuvashandura ivo kana ivo varipo. Shanduko yekugadzirisa chinhu chiri kuwedzera kunetsekana mu2020 sezvo makambani anotarisa kunyatsogadzira avo zvigadzirwa mapeji uye kuona kuti zvigadzirwa zvavo zvinomira mumigwagwa yavo mizhinji yekushambadzira. Izvi zvinogona kusanganisira kushambadzira kweFacebook kushambadza, kushambadzira kweGoogle kushambadzira, kana pa-saiti kushambadzira kwedhijitari. Seimwe yemabhenefiti akajeka kugona kutenga kubva chero kupi. Semuenzaniso, pavanotenga kubva kune bhizinesi rekunze vanogona kutarisira kuzokwanisa kutenga vachishandisa wavanoda mubhadharo wepanzvimbo mubhadharo, senzira inowanzoitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » Maitiro mune ecommerce mu2020
Maitiro ekuwedzera ecommerce kutengesa
Graphic dhizaini, basa rine ramangwana rakanaka